I-WiGig, ikamva lothungelwano olungenazingcingo? | IPhone iindaba
I-WiGig, ikamva lothungelwano olungenazingcingo?
Ikamva alinantambo, nokuba ngubani olithandayo. Iintambo zimiselwe ukuba zinyamalale, zinomda kakhulu, azonwabisi kwaye azibukeki, kwaye itekhnoloji engenazingcingo iguquka ngakumbi nangakumbi ukuzama ukusinika uzinzo olufanayo, isantya kunye nomgangatho njengonxibelelwano olunentambo. Enye yezi teknoloji intsha eza kuthi kungekudala iphucule unxibelelwano lweWiFi ekhaya Ibizwa ngokuba yiWiGig (i-Wireless Gigabit). Kodwa iza nemida ebalulekileyo, Oko kunokuthintela ukuphunyezwa kwayo emakhaya. Iqukethe ntoni, ziziphi izinto ezilungileyo nezingalunganga? Sichaza yonke into engezantsi.
1 Isantya esingaphezulu kweWiFi yesiqhelo
2 Uluhlu olunqunyelwe kakhulu: iimitha ezili-10
Isantya esingaphezulu kweWiFi yesiqhelo
Sisonka sethu semihla ngemihla: siqesha i-300Mbps yefayibha yokulinganisa kodwa ke xa sidibanisa inethiwekhi yethu ye-WiFi asifumani ngaphezulu kwe-30Mbps yokukhuphela. Ukuba sisondela kwi-router yonke into iyaphucuka, kodwa xa sisiya kwigumbi lokulala okanye ekhitshini asinakubona iNetflix kumgangatho ofanelekileyo. Imigangatho yangoku ineengxaki ezininzi emakhayeni, ngakumbi kwiindawo ezisezidolophini apho ukugcwala kwenethiwekhi ngaphandle kwamacingo kukhulu kakhulu.. Ungenelelo, iindonga kunye nomgangatho wendlela ngokwakho ziintshaba zomgangatho wonxibelelwano lwethu.
I-WiGig entsha ifika isinika isantya sonxibelelwano esiya kuthi ga kwi-8 Gbps, kodwa kulindeleke ukuba ifikelele kwi-80 okanye nakwi-100Gbps kwixesha eliphakathi. Ukufumana umbono, umgangatho wangoku onikezela ngesona santya siphezulu ngama-802.11ac anazo zonke izixhobo ze-Apple okwangoku, esinokuthi sifike kuzo i-3Gbps kwezona meko zilungileyo. Oku kuthetha ukuba sele iyinyani ukufezekisa phantse amaxesha amathathu ngesantya esine-WiGig entsha, kwaye siya kuba nakho ukufikelela kumaxesha angama-30 kwisantya sangoku esiphezulu kungekudala. Iphi ingxaki ngok?
Uluhlu olunqunyelwe kakhulu: iimitha ezili-10
Lo ngumda wokuthintela obu buchwephesha butsha kwaye obunokuphelela ukugweba ukusilela: alunabubanzi beemitha ezili-10. Ukukunika umbono kufana nonxibelelwano oluqhelekileyo lweBluetooth kule nkalo. Okubi nangakumbi kukuba, ayinakudlula eludongeni, ngenxa yoko ukusebenza kwayo kuthintelwe kwigumbi elinye endlwini.
Oku kuthetha ukuba kwigumbi ngalinye kufuneka siphindaphindwe esinoxanduva lokwenza inethiwekhi yommandla. Ewe izixhobo ezixhuma ziya konwaba kunxibelelwano oluphezulu, kodwa utyalomali ekuqaleni kuya kufuneka lube lukhulu ukuze "udibanise" iflethi enamagumbi amathathu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-WiGig, ikamva lothungelwano olungenazingcingo?
PinOut! ngumdlalo oguqula iVenkile ye App, yazi
Umongameli obukhali "uqinisekisa" i-iPhone 8 enesikrini se-OLED